Antikristy - Wikipedia
Ny Antikristy dia zavatra na olona resahina ao amin' ny eskatôlôjia kristiana sy silamo, nefa tsy mitovy ny fiheveran' ireo fivavahana roa ireo izany. Ao amin' ireo Epistilin' i Joany sy ao amin' ny Epistily faharoa ho an' ny Tesalôniana no iresahana izany ao amin' ny Baiboly, amin' ny endrika miovaova, nefa nanovo tamin' zay efa hita taratr tao amin' ny jodaisma atao hoe "antimesia".
Ny Antikristy mihaino ny resak' i Satana, fanehoan' i Luca Signorelli ao amin' ny sapelin' i San Brizio.
Ny teny hoe antikristy dia avy amin' ny teny grika tranainy hoe ἀντίχριστος / antíkhristos, izay midika hoe "mpanohitra an' i Kristy". Ny hoe anti- dia midika hoe "manohitra" fa ny khristos kosa dia "Kristy".
Ao amin' ireo Epistilin' i Joany dia ampiasaina amin' ny endrika milaza maro ny teny hoe Antikhristos, ka enti-manondro ireo Jodeô-kristiana izay niala tamin' ny fianakaviam-be kristiana noho ny fandavany ny maha Andriamanitra feno an' i Kristy na ny fandavany ny fahatongavany ho nofo. Taorian' izany dia samy nanolotra ny mety ho endriky ny ataony hoe antikristy na ny eskatôlojia jiosy na ireo Rain' ny Fiangonana.
Ny olona na zavatra heverina ho AntikristyModifier
Indraindray dia manondro olona, izay aseho ho manao fombam-biby, io teny hoe antikristy io;nefa indraindray koa dia manondro vondron' olona. Olona na vondron' olona mpisandoka mampidi-doza izay te hisolo toerana an' i Jesoa Kristy ny Antikristy, ka maro ny fanakaran-kevitra sy ny fivoasana natao hatramin' ny nandrosoan' ny kristianisma tany am-boalohany mandraka ankehitriny, izay hita taratra amin' ny asa soratr' ireo Rain' ny Fiangonana, izay nohatevenin' ny asa soratra kristiana maro hafa nandritra ny taonjato maro. Ireo asa soratra ireo dia samy milaza ny hisehoan' ny Antiikristy amin' ireo fisedrana farany mialoha ny hiafaran' izao tontolo izao.
Ao amin' ny silamo dia maro ny lovantsofina ara-paminaniana (hadita) miresaka momba ny al-Dajjâl ("mpisandoka"), izay mifandraika amin' ny antsoin' ny Kristiana hoe Antikristy. Ny fiavian' io al-Dajjâl io dia fotoana manan-danja ao amin' ny eskatôlôjia miozolmana. Amin' ny andro farany no hisehoany ka tsy maitsy hopotehin' i Îsâ (Jesoa) amin' ny fiverenany izy. Miovova arakaraka ny firehana sy ny mpanao heviteny ny lovantsofina momba ny al-Dajjâl.
Maro ireo olona na fikambanana nifandimby noheverina na mpitovina amin' ny Antikristy nandritra ny taonjato maro mandraka ankehitriny, indrindra amin' ny zava-mitranga mampahatsiahy ny lohahevitry momba ny fiafaran' izao tontolo izao na ny arivo taona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antikristy&oldid=1000617"
Dernière modification le 22 Janoary 2021, à 11:05
Voaova farany tamin'ny 22 Janoary 2021 amin'ny 11:05 ity pejy ity.